Oge na Kildare - IntoKildare
Site na ubochi mmiri na -adịghị mma ruo ogologo mgbede anwụ na -acha ọla edo na abalị oyi, Kildare nwere ihe pụrụ iche ọ ga -enye n'oge ọ bụla.
Ebe Ireland bụ agwaetiti, okpomoku ka na-adị nwayọ kwa afọ. Jenụwarị na Febụwarị bụ ọnwa kacha ajụ oyi, Julaị bụkwa ọnwa kacha ekpo ọkụ na afọ. Ndị Irish na -enwe mmasị ikwu maka ihu igwe ma nyekwa ọdịdị ya na -agbanwe agbanwe ị ga na -anụkarị ka ndị mmadụ na -ekwu maka 'oge anọ n'otu ụbọchị' nke pụtara mgbe ị na -akwakọba maka ọnụnọ na Kildare dịrị njikere maka ihe niile ga -eme!
Ị nwere ike lelee ọnọdụ ihu igwe Kildare na Weebụsaịtị Eireann.
Kedu oge kacha mma ịga Kildare?
Summer bụ oge kacha ewu ewu iji gaa Kildare. N'ime June, Julaị na Ọgọstụ, ọnụọgụ ndị ọbịa na -abawanye, ka ndị mmadụ na -esi esenidụt abịa njem ebe ihu igwe dị ọkụ. Ebe oke ohia na ime obodo juputara na ndụ, yana okirikiri okooko osisi zuru oke, oge ọkọchị bụ oge zuru oke iji nwee ọ enjoyụ njem ụgbọ mmiri na -aga na ọwa mmiri, na -aga mkpagharị wee pụọ n'ehihie n'ubi biya.
Ọ bụrụ na ọ ga -amasị gị ịnụ ụtọ ụbọchị anwụ na -acha, mana enwere igwe mmadụ ole na ole, oge kacha mma iji gaa Kildare dị mmiri. Site na Machị ruo Mee ihu igwe na -akawanye njọ - mana igwe mmadụ ahụ agbachapụla. Chọgharịa n'èzí na -agba agba na ndụ na ụbọchị dị nro na ọtụtụ ikuku dị mma.
n'oge n'oge mgbụsị akwụkwọ, oge njem nlegharị anya na -agbada, nke pụtara obere oge ọrụ n'afọ iji nyochaa oke ohia nke Kildare, ikekwe ị nweta onwe gị ụfọdụ ebe ndị ama ama. Ihu igwe n'oge mgbụsị akwụkwọ nwere ike bụrụ ntakịrị ihe - anyị na -enweta izu ole na ole mara mma na Septemba. Rịba ama na Ọktọba bụ n'ọnụọgụgụ ọnwa kacha agba mmiri, mana ọ bụkwa Halloween na mgbe ezigbo ịdị mma nke ọdịda mgbụsị akwụkwọ malitere igosi agba ya.
Irish oyi ji obere ụbọchị na ogologo abalị mara ya, mana ka ọ na -erule ekeresimesi ị gaghị emeri mmụọ mmemme na ikuku. Kpuchie ọkụ wee gaa maka mkpagharị na -atọ ụtọ wee jiri Guinness gbada n'ihu ọkụ n'ime ụlọ mmanya mara mma.
Machị - Mee
10 - 15 Celsius C (46 - 60 ° F)
June - Ọgọst
15 - 20 Celsius C (60 - 70 ° F)
Septemba - Nọvemba
11 - 14 Celsius C (52 - 57 ° F)
Disemba - Febụwarị
5 - 8 Celsius C (40 - 46 ° F)